म भाग्यवादीको विरोधी होइन तर भाग्यमा पुर्णतया अन्धविस्वास पनि गर्दैन ।
जीवनको एउटै मात्र अपरीवर्तनशील नियम यो हो कि हरेक चिज परीवर्तनशील छ ।
तपाईलाई के लाग्छ ? के मान्छे ले अन्जानमा आफुलाई असफलतातर्फ धकेलिरहेको छ त् ?
पक्कै पनि होईन ।तपाई मान्नुस या नमान्नुस मान्छेले आफुलाई जानाजान नै खाडलमा जाकिरहेको छ ।झट्ट सुन्दा तपाईलाई यो कुरा अपवाद जस्तो लाग्न सक्छ । तपाई आफैलाई लाग्नसक्छ कि म आफैले जानेबुझेर आफ्नो नोक्सान किन गर्छु ।तर एकैछिन सोच्नुहोस त् !के रीसले आजसम्म कसैलाई फाईदा पुर्याएको छ त् ?
के सुर्तीजन्य पदार्थमा ‘स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ’ भनेर बताईएको हुदैन ?के तपाईहामीलाई तयारी खानेकुराहरु(junk Food) खानुहुदैन भन्ने थाहा छैन ? हामीलाई सबै कुराको ज्ञान हुदाहुदै पनि हामीले त्यसलाई वेवास्ता गरीरहेका छौ ।यसलाई अज्ञानता होइन म लापरवाही भन्छु ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अधिकांस तपाईहामिहरु सफलताको एउटा झिनो आशासम्म राख्न सक्दैनौ । सफलता शब्द देखि नै टाढा भाग्न खोज्छौ।किनकि हाम्रो वरपरको वातावरण अर्थात माहोल नै यस्तो छ कि हामीले कम उमेर देखि नै घरपरिवार / साथिभाईहरुबाट “हामि गरीब छौ त्यसकारण धेरै ठुलो प्रगती गर्न सकिदैन , ठुलो सपना देख्नुहुदैन ,तेरो त भाग्य नै छैन ,ऊ कति Tallent थियो र त् सकेन त् कुन बारिको मुला होस् ,” भन्ने जस्ता सयौ वाक्यहरु हामि हजारौ पटक सुनिरहनछौ र आफुलाई कमजोर र निकम्मा ठान्न थाल्छौ ।
जसकारण यहि कुरा हाम्रो अवचेतन मनमा जान्छ र अन्त्यमा त्यहि नै वास्तविकता ठहरिन्छ । हामीले यतिसम्म पनि हिम्मत राख्दैनौ कि आफुले आफुलाई विस्वास गरेर यो भन्न सकौ कि “म पनि आफ्नो भाग्य आफै लेख्न सक्छु भनेर । भनिन्छ भाग्य हातको हत्केलामा लेखिएको हुन्छ भनेर तर यसो सोच्नुहोस त् ति व्यक्तिहरुको भाग्य चाहि कहा लेखिएको हुन्छ होला, जसको एउटा पनि हात हुदैन ?